बढ्दो शैक्षिक विसङ्गति – Chitwan Post
कवि गोविन्दराज विनोदीलाई भेट्न म उहाँको निवासमा पुगेको थिएँ एकदिन । समय थियो दिउँसोतिरको । उहाँ त्यसबेला अलिक अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो र घरैमा आराम गरिरहनुभएथ्यो । स्वास्थ्य अवस्थाबारे वार्तालाप भएपश्चात् समसामयिक स्थानीय तथा राष्ट्रिय सन्दर्भबारे पनि कुराकानी भए हामीबीच । त्यसबेला सिन्डिकेटका विरूद्धमा चलेको आन्दोलनले तरङ्गित भइरहेको थियो मुलुक । यसै सिलसिलामा उहाँले भन्नुभएथ्यो, ‘यातायातमा भैmँ शिक्षा, साहित्य आदि हरेक क्षेत्रलाई थिल्थिलो तुल्याएको छ सिन्डिकेटरुपी कीटाणुले ।’
‘गुरू ! यो सिन्डिकेटले त कुहेको फर्सीभैmँ तुल्याइरहेछ यो मुलुकलाई नै’, मैले पनि थपेँ ।
‘हो नि, अझ देशको शैक्षिक विसङ्गति निकै महँगो साबित भइरहेको देखिरहेछु म’, मैले उहाँको भनाइमा शिर हल्लाउँदै फेरि थपेँ, ‘अझ स्वाभिमान, आत्मगौरव र राष्ट्रियताको भावनामा गहिरो ठेस पु¥याइरहेको देख्छु म त झन् ।’
‘हो नि, सरोकारवाला पदाधिकारीले बुझेर सुधार गर्नुपर्ने हो बेलैमा ।’
‘मुद्रा भए पुगिहाल्यो नि, देश र जनताको के मतलब भयो र तिनलाई !’
‘हो हुन त ।’
मैले फेरि थपेँ, ‘आपैmँ डिभी भर्छन्, ग्रीनकार्ड लिन्छन् । छोराछोरीलाई पनि उतै बस्न प्रेरित गर्छन् भने तिनलाई शैक्षिक सिन्डिकेटसँग के सरोकार र !’
‘यो सिन्डिकेट कहिले अन्त्य होला र खै !’
‘कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेझैँ त्यो दिन निश्चय नै आउँछ, धेरै कुर्नु नपर्ला पनि गुरूजी ।’
त्यसदिन धेरैबेर बसेर साँझ फर्किएँ म ।
हुन पनि राज्यको व्यवस्था परिवर्तित हुँदा, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नयाँ–नयाँ प्राप्तिहरुपश्चात् बदलिने गर्छ पाठ्यक्रम । सँगसँगै समाज र मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पनि करिब पाँच–सात वर्षको अन्तरालमा पनि पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पाइन्छ पनि । नयाँ पाठ्यक्रम तयार पार्दा अघिल्ला पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको समेत लघु तथा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसका सबलता र दुर्बलताहरु केलाएर त्यसलाई समकालीन समाज र मुलुकको आवश्यकताअनुरुप तुल्याउने कार्य गरिन्छ । यसरी तयार पारिएको पाठ्यक्रमका आधारमा केन्द्रित रहेर पाठ्यपुस्तक तयार पारी नमुना परीक्षण गरिएपछि मात्र लागू हुने गर्छ देशभरि ।
हात्तीको बाह्य दन्तझैँ माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा चाहिँ पु¥याइन्छ सामान्य प्रक्रिया । अझ आधारभूत तहदेखि संस्थागत विद्यालयतर्फका पाठ्यपुस्तक लेखन र प्रकाशनलाई हेर्दा गुणस्तर सुधार गर्नमा भन्दा खल्ती सुधार्नमै केन्द्रित देख्छु म । द्रव्यमोहमै पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने, द्रव्यमोहमै हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक फेर्ने गर्दा दाजुदिदीले पढेका पुस्तक भाइबहिनीहरुले पढ्नसमेत नदिने परिस्थिति सृजना गर्ने गर्दा लागू गरिएका पाठ्यपुस्तकबाट केकति उद्देश्य परिपूूर्ति भए/भएनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्न र आवश्यक सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिने अवसरसमेत प्राप्त नहुँदै अर्को प्रकाशनको पुस्तक लागू गर्ने संस्थागत विद्यालयको परिपाटीलाई के भन्ने ?
अझ विश्वविद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम परिमार्जन एक दशकमा पनि नहुने, कथञ्चित भइहालेमा पनि भइरहेका विषयहरुलाई नै तल र माथि, एउटा वर्षको अर्को वर्षमा अलिकति यता र उता गर्ने र भूलभुलैयामा राखेर ढाँटेपाटे प्रकृतिको पाठ्यक्रम तयार पार्ने, त्यसैलाई पनि कक्षा आरम्भ गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि ५÷६ महिनाअघि सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेमा स्वयं पाठ्यक्रम निर्माताहरु नै पाठ्यपुस्तक लेखनमा अग्रसर भई आप्mनो पाठ्यपुस्तक प्रकाशनमा नआउँदासम्म त्यसलाई सार्वजनिक नै नगर्ने, पाठ्यपुस्तक नै पनि त्यस पाठ्यक्रममा आधारित भई अरु कसैले त्यो वर्ष पुस्तक तयार पार्न नसकोस् भन्ने दृष्टिले शैक्षिक वर्ष आरम्भ भएको एक–डेढ महिनापछि मात्र बजारमा ल्याइदिने परिपाटीलाई एकखाले सिन्डिकेट भन्दा शायद नहोला अतिशयोक्ति ।
पहिले पाँच वर्ष नलाग्दै बुबाआमाले पठाउँदैन थिए विद्यालय । जब संस्थागत विद्यालय अझ त्यसमा पनि मन्टेश्वरी प्रचलनमा आए, बच्चाले तोते बोल्न थालेसँगै जबर्जस्ती मुन्ट्याएर पु¥याउन थालियो त्यहाँ । त्यसैले, केही शिक्षाविद्ले भनेका रहेछन्, यसलाई ‘मुन्टेश्वरी’ । जहाँ बच्चामा पढाइ र लेखाइका निम्ति निरन्तर पर्न थाल्छ दबाब । अहोरात्र आमाबाबुदेखि हजुरबा, हजुरआमाहरुबाट पनि मानवीय गुण र भावना सिक्नु र ग्रहण गर्नुपर्ने उमेरमा किताब र कापी भएका गरूङ्गा झोला भिर्नु र त्यसैमा रगडिनुपर्ने भएपछि उनीहरुको बालापन त खोसियो नै, सँगसँगै शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि र विकासमा पनि पर्ने भयो असर ।
यस अवधिमा त उनीहरुलाई आमासहितको पारिवारिक वातावरण हुन्छ अपेक्षित । प्रकृतिको काखमा खेल्दै र रमाउँदै धेरै वस्तु र विषयसँग समायोजन गर्न आपैmँ पनि सिकिरहेका हुन्छन् उनीहरुले । भाषा, संस्कार, संस्कृति र अपनत्वको पनि गरिरहेका हुन्छन् अभ्यास । यसर्थ पनि उनीहरुमा दया, माया, करूणाजस्ता अत्यन्त मानवीय संवेदनाजस्ता गुण विकसित गर्न पनि यो वयमा विद्यालयीयभन्दा पनि आवश्यक हुने गर्छ नैसर्गिकरुपमै दिइने पारिवारिक वातावरण । तबमात्र बच्चामा सत्यता, कोमलता, हार्दिकता, विनयशीलता, माया, आदरजस्ता मानवीय गुण हुन्छन् विकसित र उनीहरु एउटा पूर्ण मानव बन्ने दिशामा निरन्तर लागिपर्छन् । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ यही बालापनमा विकसित गरिएका राम्रा या नराम्रा गुणहरुको प्रभाव मान्छेको जीवनभरि पर्छ । यस सत्यलाई स्वीकार गरेर बच्चालाई कम्तीमा पनि घरैमा चार वर्षसम्म यस्ता गुण सिक्ने परिवेश दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त ।
तर, म देखिरहेछु– त्यही चिचिलै उमेरमा विद्यालयको हाताभित्र छिराएर कैयौँ अभिभावक मातापिता हुनुको कर्तव्य निर्वाह गरेको भ्रममा परिरहेका । मन्टेश्वरीका सञ्चालक र संस्थागत विद्यालयका फाउन्डरहरु बच्चा जन्मनासाथ उपहार लिएर पुगिरहेका हुन्छन् साइनो जोड्न । तिनका बीचमा हुने होडबाजीले शिशुवयमै जबर्जस्ती पु¥याइएका पनि देख्छु म चिचिलैमा विद्यालयको हाताभित्र ।
सरकारीमा पढ्नै चाहे पनि नाता, धर्म, जाति, वर्ग, लोभलालच, लोलोपोतो, भौतिक पूर्वाधार आदि इत्यादिमध्ये कुन सूत्र प्रयोग गरेर हुन्छ पैसो तिर्न सक्ने खालका अभिभावकको बच्चा संस्थागतमा पुग्न बाध्य परिवेश सृजना गरिएको हुन्छ प्रायजसो ठाउँमा । धेरै विषय पढाइ हुने भ्रम छर्न अरु थुप्रै साहित्य, कम्प्युटर, जिके, अप्सनल म्याथजस्ता विषय पनि थपिदिएका हुन्छन् । जब कि, कत्ति विद्यालयमा ती विषयहरुको एक तिहाइ अंश पनि सिकाइएको हुँदैन वार्षिक परीक्षाको घडीमा पनि । आधारभूत तहका बच्चा त खेलकुद, साहित्यिक कार्यक्रमहरुसँगै मनोरञ्जनका साथमा विषयबोध ग्रहण गर्न चाहन्छन् । धेरै विषयका पुस्तक धेरै कमिसन भन्ने सूत्र जपिरहेको विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपल वर्षभरिमा अतिरिक्तरुपमा राखिएका पुस्तक कति पढाइ भयो भन्ने कुरामा राखिरहेका हुँदैनन् वास्ता । बरू, यसलाई गरिरहेका हुन्छन् अनदेखी ।
संस्थागत विद्यालयमा छोरालाई भर्ना गरेर फर्केर आएपछि चूडामणि भाइले भन्यो, ‘साँल्दाजु ! के गर्नु यहाँ सरकारी स्कुलमा पढाऊँ भने पढाइ राम्रो छैन । छोराको भविष्य बिगार्नु भएन । के गर्नु, रगत–पसिना निचोरेरै छाड्दा रहेछन् । गाला चाउरी पर्न बूढै हुनुपर्ने रहेनछ अब ।’
‘के भयो र त्यस्तो कुरा गरेको भाइ ?’ मैले यति के सोधेको थिएँ ऊ सासै नबिसाई भन्न थाल्यो, ‘साँल्दाजु, हेर्नुस्न टाई, बेल्ट त स्कुलबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता ठीकै थियो तर ड्रेस, जुत्ता, मोजा, ट्रयाकसुट, किताब, कपी, कलम, पेन्सिल, कटरहरु पनि त्यहीँ किन्नुपर्ने अरे । बाहिर बजारमा गएर त्यही जुत्तामोजा सोधेको त्यहाँ भनेभन्दा दुईगुना सस्तो । यो त अति नै भएन र ? अरु कपडा बुभ्mदा पनि त्यस्तै, किताब, कपी र कलमहरु पाउने छूट पनि नदिने रे, जत्ति त्यहाँ लेखेको छ उत्तिमै किन्नुपर्ने रे । ट्युसन सुरूबाटै हाल्नुपर्ने आदि इत्यादि ।’
सोचेँ, एउटै ठाउँमा पाइने बहनामा बोर्डिङवालाले टाँगाको घोडालाई झैँ यस्तो लगाम खिच्छन् कि बिचरा अभिभावक हुन्छन् ठहरै । पुस्तकको भारीले उता बच्चा ठहरै । सरकारी विद्यालयले राम्रो करिश्मा देखाउन नसक्दा बच्चा, अभिभावक र मुलुकका लागि यो कस्तो विडम्बना ? अलिअलि त अभिभावकको अङ्ग्रेजी मोेहले पनि काम गरिरहेछ यसमा । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने बहनामा चर्को शुल्क असुल्ने खुलिरहेको छ बाटो संस्थागतलाई पनि ।
आजकल सरकारी विद्यालयले पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन आरम्भ गरेपछि यहाँ पनि विद्यार्थीको चाप बढेको त छ, तर त्यो न नेपाली न त अङ्ग्रेजी हुँदा प्रायः त्यो खिचडी भएको स्वयं अङ्गेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु बताइरहेका छन् र यसमा मेरो बुझाइ पनि छ यस्तै । त्यसो त, संस्थागत विद्यालयमै अध्ययन गरेका अधिकांश विद्यार्थीहरु पनि हुन्छन् अङ्ग्रेजीमै कमजोर । ठूलो आर्थिक व्ययभार खेपेर संस्थागतमा पढाउँदा पनि परिणाम बल्लतल्ल सी प्लस आउनेहरुको लामै सूची देखेको छु मैले पनि ।
अभिभावकको मनोविज्ञान बुझेका संस्थागत विद्यालयका संस्थापकले पनि विद्यालयको नाउँ नै पेन्टागन, ह्वाइट हाउस, प्यारागन आदि इत्यादि राखिदिएका छन् । एकातिर विदेशको र अर्कोतिर विदेशीको झल्को दुवै पाएपछि सबै मख्ख, चाहे त्यसले बालकमा राष्ट्रियता दुर्बल बनाओस् चाहे मान्छेपन, सामाजिकता र दायित्वबोध नै नभरोस्, चाहे स्वार्र्थी, सुविधाभोगी र धनमुखी बन्न प्रेरित किन नगरोस्, सबै स्वीकार्य । धेरै अङ्क पाए गुणस्तरीय, नपाए कमजोर, गुणस्तरहीन आदि इत्यादि । यो कस्तो व्यवहारलाई नभई अङ्कलाई गुणस्तर मान्ने रीति ? लोकललाई चटक्कै छाडेर ब्रोइलर र कोइलर अङ्गीकार गर्ने हाम्रो संस्कृतिजस्तै यहाँ पनि झल्केकै छ । यो अङ्ग्रेजी मोह अझ त्योभन्दा पर गएर भन्दा विदेशमोहको पराकाष्ठा हो भन्ने लाग्छ मलाई, मन पराएको मान्छे नपाए पनि तृष्णा मेट्न उसको तस्बिर बोकेर हिँडेजस्तो ।
मुख्य चीज भनेको विषयवस्तुगत ज्ञान हो, होइन माध्यम । भाषाका दृष्टिले हेर्दाचाहिँ भाषा नै साधन पनि हो र साध्य पनि । यस्ता संवेदनशील विषयवस्तुको शिक्षणमा विदेशी भाषाको उपयोगले राष्ट्रियता, धर्म र संस्कृतिमा पैदा गरिरहेको छ विचलन । संस्थागत विद्यालयबाट उत्पादित प्रायजसो प्रतिभाहरुमा पलायनमुखी प्रवृत्ति नै छ देखिने गरेको । यहाँ बसेर केही हुँदैन । यहाँ केही छैन । यस्तो मुलुकमा पनि के गरेर बस्नु, जहाँ केही सम्भावना छैन । न साधन छ न त केही सुविधा छ । सुरू हुन्छ जन्मभूमिको निन्दा ! यो कस्तो शिक्षा जुन मुलुकले जीवन दियो, शिक्षादीक्षा दियो उसैको निन्दा ? जसको जौ खानु उसैको जुँगा मोल्नु ? यस्तो नकारात्मकता पैदा गर्ने जड के हो ? हुन त, चोर औँला तेर्सिन्छ राजनीतितिर पनि । भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अराजकता र द्वन्द्वतिर पनि, तर सत्शिक्षाको अभावमै फैलिरहेछ नकारात्मकता ज्यादा ।
यसैले मलाई लाग्छ, हामीले गुणस्तरका नाउँमा दिइरहेको शिक्षामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ अब । शिक्षा घरको मूल खाँबो हो भन्ने यथार्थबोध हरेकलाई छ, झन् सरकारलाई नहुने त कुरै भएन । यसलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले यसमा गर्नुपर्छ प्रचुर लगानी, ताकि देशले लगानी गरी उत्पादन गरेका विद्यार्थीले अब देशको निन्दा नगरुन् । घृणाले नहेरुन् र विदेशी दासता र सुखस्वार्थलाई लक्ष्य नबनाऊन् । दलहरुले पनि चुनावी घोषणापत्रलाई हात्तीका देखाउने दाँतमात्र सिद्ध नगरुन् । साँचो भनूँ त भर्खरै जारी गरिएको शिक्षा नीतिमै पनि स्वच्छता र गतिशीलता भेट्तिनँ म । शिक्षा नीति त यस्तो आवश्यक देख्छु म जसले धनमुखीभन्दा जनमुखी, विकसित अन्य राष्ट्रप्रतिभन्दा स्वराष्ट्रप्रति, द्रव्यभक्तिभन्दा मातापिता र गुरूभक्ति तथा वर्गीयता सृजना गर्नेभन्दा समानता सृजना गर्ने, कोरा विज्ञान प्रविधियुक्तभन्दा अध्यात्म ज्ञानसहितको विज्ञान प्रविधियुक्त जनशक्ति पैदा गरोस् । प्रधानाध्यापकदेखि उपकुलपतिसम्मका शैक्षिक सारथिको नियुक्तिमा राजनीति नभई पूर्णतः नीति हाबी होस् । करार, राहत र निजी स्रोतमा आधारित शिक्षक चयनमा पनि हाम्राभन्दा राम्रा पर्ने नीति बनोस् । परीक्षामुखीभन्दा ज्ञानोत्पादनमुखी र अङ्कभन्दा व्यवहारकेन्द्रित सिकाइ विधि र पद्धति अनुसरण गर्ने आवश्यक वातावरण बनाओस् ।
हरेक विषयमा झन्डै बारैमास ट्युसन नपढाईकन नहुने, गेस पेपर, प्रश्नपत्रको सँगालो आदि इत्यादि खरिद नगरी नहुने जस्ता महामारीले सखाप बनाइरहेछ शैक्षिक धरातल । बर्खामा च्याउझैँ उम्रिएका ट्युसन सेन्टरहरु नियमन र नियन्त्रणविहीन ब्रिजकोर्स, शैक्षिक परामर्श केन्द्र र गेस पेपर, गाइड, नोट, प्रश्नपत्रका सँगालोहरुले भत्काई दिइरहेछन् नेपालको ज्ञानोत्पादन गर्ने केन्द्र । नवोदित पुस्तामा ज्ञानको र प्राविधिक ज्ञानको भोकभन्दा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने र धेरै अंक ल्याउने चक्रवातमा फसाइरहेछन् यिनले । पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको ज्ञानगङ्गामा डुबुल्की लाउन दिएका छैनन् यिनले । बरू, परम्परागत पठनसंस्कृति भत्काइदिएर कोरा जनशक्ति तुल्याइँदा मुलुकले बौद्धिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेछ आज । यस्ता माकुरे जालो सहर हुँदै गाउँबस्तीसम्म फिजाइसकिएको छ स्थिति अहिले । यस्ता सिन्डिकेटरुपी विषवृक्षका जरासहित समुल नाश गर्ने नीति निर्माण गरिएमात्रै देशको मूल खाँबो तन्दुरूस्त हुन्छ र मुलुक समृद्धितिर लम्कन्छ, नत्र हुन्छ नारामा मात्रै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’